Fifandraisana mivadika amin'ny mpilalao iray ao Tunngle
Araka ny fantatrao, i Tunngle dia natao voalohany indrindra hilalao amin'ny mpampiasa hafa amin'ny Internet. Ary noho izany dia tena mampalahelo raha toa ka mitatitra tampoka ny fandaharana fa misy fifandraisana ratsy na ity mpilalao ity. Sarotra be izany toe-javatra izany, ary tokony hatao amin'ny tsirairay izany. Ny fototry ny olana "Fifandraisana tsy azo ovaina amin'ny mpilalao" dia mety hisoroka ny fanombohana ny lalao miaraka amin'ny mpilalao voafantina, maneho dingana iray tena tsy marim-pototra, ary koa misy fiantraikany amin'ny haavon'ny fampisehoana hafatra amin'ny chat.
Ratsy 4-109 ao Tunngle
Tunngle dia fandaharanasa misy rafitra rafitra sarotra sy tsy mora azo mora foana. Tsy mahagaga raha mety hitranga matetika izany na ny fahasimbana. Tunngle dia manome tatitra 40 momba ny tsy fahombiazany sy ny fahadisoana isan-karazany, izay tokony hampidirina amin'ny olana maro izay tsy vitan'ny fandaharana ny tatitra.
Tunngle dia olo-malaza ary manompo tolotra amin'ireo izay te-hanokana fotoana ho an'ny lalao fiaraha-miasa. Tsy ny mpampiasa rehetra ihany no mahafantatra ny fomba fampiasana azy io araka ny tokony ho izy. Ity no lahatsoratra hitranga. Fanoratana sy fametrahana Tsy maintsy misoratra eo amin'ny tranonkalan'ny Tunngle aloha ianao.
Mamaha ny olana "Mametraha tsy feno na azafady download sy hazakazaka" ao Tunngle
Taorian'ny fantsona an'i Tunngle dia mety hahagaga ny sasany amin'ireo mpampiasa sasany - rehefa manandrana manomboka izy ireo dia manome fahadisoana ilay fandaharana ary mandà tsy hiasa. Amin'ity toe-javatra ity, tokony averinao averimberina indray izany indray, kanefa na dia aorian'izay dia mitranga ny toe-javatra matetika. Noho izany mila mahatakatra ny olana ianao.
Fanoratana amin'ny Tunngle
Miasa miaraka amin'ny Tunngle, toy ny amin'ny fanompoana hafa, dia manomboka hatrany amin'ny dingana voalohany mahazatra indrindra - aloha ianao dia mila mahazo ny kaontinao. Mba hanaovana izany, mila manoratra amin'ny fomba fanao mety ianao, ary aorian'izay dia azo atao ny mampiasa ny asan'ny fanompoana. Mila mijery ny fomba fisoratana anarana marina ianao.
Ny antony sy ny vahaolana diso 4-112 ao amin'ny Tunngle
Tunngle dia tsy rindrambaiko ofisialin'ny Windows, fa miasa ao anatin'ny rafitra ho an'ny asany izany. Noho izany dia tsy mahagaga raha ny rafitra fiarovana maro dia afaka manelingelina ny andraikitra amin'ity programa ity. Amin'ity tranga ity dia miseho ny code 4 = error code mifandraika amin'izany, ary rehefa tapitra dia tsy mitsahatra manao ny asany i Tunngle.
Ireo sombintsombin'ny lalao amin'ny alalan'ny Tunngle
Ny serivisy Tunngle dia tena malaza amin'ireo tsy te-hilalao irery. Eto dia afaka mamorona fifandraisana amin'ny mpilalao na aiza na aiza manerana an'izao tontolo izao ianao mba hankafizanao an'io na izany lalao izany miaraka. Mijanona fotsiny ny fanaovana ny zava-drehetra mba tsy hahatonga ny olana mety tsy hanelingelina ny hankafizana ny fikorontanan'ny monsters na zavatra hafa ilaina.
Manokatra ny seranana ary mametraka Tunngle
Mifanohitra amin'ny fanehoan-kevitry ny mpisera maro liana, ny fampiasana Tunngle dia tsy ampy fotsiny ny fametrahana ny programa ary hamoaka azy ny lalao tianao indrindra. Zava-dehibe ny mahatakatra fa ny fandaharan'asa dia tsy mampiasa ny rafitra tsotra sy mora takarina, ary noho izany dia aorian'ny fandefasana voalohany dia ilaina ny manao ny fanalahidy fampiharana.
Na dia mampalahelo aza ny miaiky, dia mety handrava an'i Tunngle tahaka ny programa hafa ihany koa i Tunngle. Ary ny fahatsiarovan-tena amin'izany toe-javatra izany dia manimba ny fihetseham-po, satria ny ambiny, ho an'ny mpampiasa matetika tonga eto, dia tokony hajanona tsy misy fiafarany. Ary sao dia kely dia kely io fiandrasana io, tokony haka ny vahaolana amin'ny olana ianao.
https://termotools.com mg.termotools.com © Tunngle 2019